Unyaka wesilwanyana ngo-2016 kwi-horoscope esempuma: yintoni enokuyilindela kwisimboli sezilwanyana ngo-2016
Njengoko uyazi, unyaka ngamnye unesimboli sayo - isilwanyana. Umzekelo, ukuphuma kuka-2015 ngumnyaka weGoli (iigusha). Ukususela kumaxesha amandulo, abantu bakholelwa ukuba kuninzi kuxhomekeke kwisimboli sesilwanyana: kuya kuba yintoni isivuno, indlela umphathiswa oya kuyinyamekela ngayo impilo kunye nentlalo-ntle yabantu, zeziphi iimpawu eza kunikwa umntu ozalwe ngexesha elithile.
Ngobusuku boNyaka omtsha, isimboli sonyaka ozayo sizama ngazo zonke iindlela zokubhenca. Ngenxa yale njongo, uNyaka omtsha ubingelela kwiingubo zombala ochanekileyo kwaye uzilungiselele iitheyibhile zokutya.
Sisiphi isilwanyana unyaka ka-2016: i-horoscope
2015 kwakuyiminyaka yezimvu, kwaye yiphi isilwanyana unyaka ka-2016? Ikhumba leMlilo liya kufaka indawo yezimvu ezimhlophe ezizolile. Lo mboni unomntu okhethekileyo. Iimbongolo zibonakaliswe ngolu hlobo njengemvakalelo, inzondo, ubuchule kunye nobuchule. I-Mnyama evuthayo inomdla kakhulu, ihlala ibeka iinjongo ezintsha kwaye iphumelele ngayo ngobuqhetseba bayo.
Abantu abazalwa ngonyaka weMonkey Fiery bakhokeli ebomini abahlala befumana oko bafuna ebomini. Bavakalelwa kakhulu kwaye besoloko bekwazi ukufihla iimvakalelo zabo kwabanye, okubenza bakwazi ukuphumelela kuyo nayiphi na into engekho. Abantwana abazalelwa kulo nyaka bayabonakala ngobuchule babo. Ziyazibonakalisa ngengqondo ebukhali kunye nokucinga okuhlalutyo. Kulo bana bafuna ukukhula ngempumelelo abantu, ngamanye amaxesha nabaculi abadumileyo. Kodwa ke abaninzi, abazalelwa ngonyaka weMonkey Fiery, baxhamla emsebenzini wabo ogqithiseleyo. Aba bantu abanakho ukuhambela, okwezinye iimfuneko.
Yintoni enokuyilindela ukususela ngonyaka weMonkey Fiery?
Umncedisi ngamnye uchaphazela unyaka wakhe, ukwenza ezinye iinkalo zobomi bomntu ziphumelele kwaye abanye baphumelele. I-Mnyama evuthayo ilungile ekubeni ichaphazela ngokuthe ngqo yonke into-kwimpilo, ubuhlobo bomntu, ukukhula komsebenzi.
Ngokwemigaqo yobungcali, i-Monkey iya kunceda wonk Mhlawumbi, ukongeza kwi-earnings eyisiseko, abaninzi baya kuba neendlela ezintsha zokuzalisa uhlahlo lwabiwo-mali. Ngoko ukuba unengcamango ongathanda ukuyisebenzisa, kodwa ungalindeli, unganqikazi ukwenza oko ngo-2016.
Ubomi bakhe bomntu, ubuhlungu beMonkey Fiery buyakunceda ufumane umphefumlo wakho umlingane xa ungalindelanga. Abantu bodwa bodwa bafuna ukutyelela iziganeko ezininzi kangangoko kunokwenzeka, apho babengakaze babe khona, ukufumana indawo kunye neendawo ezaziyo. Abathandekayo abasele bebudlelwane, sincoma ukuba sicinge ngegunya labo. Imitshato eyenziwe ngonyaka we-Monkey, iya kuba yithembisa, iyavuya kwaye igcwele iimvakalelo.
Ngo-2016, kuyafaneleka ukujonga ngakumbi kwimpilo yakho. Ngenxa yokuphila okungapheliyo, izifo ezingapheliyo ziyakwazi ngakumbi. Ukuze ugweme oku, kufuneka uhlale uthatha isheke kunye nogqirha wakho kwaye ungakulibali ngokuphumla - sebenze imihla ngemihla enye enye ngeveki ekhululekile.
Ngo-2016 kwikhalenda yempuma ngumnyaka weMonkey Fiery, evuyayo kwaye ekhutheleyo. Yisebenzise inzuzo yeli lwanyana, kwaye ngokuqinisekileyo uya kufinyelela eziphakamileyo kulo nyaka!
Ukugqithisa kweenwele zakho kumqondiso wezodiac
Umntwana omncinane kunye nokutya okuqinileyo
Iibhiliksi ezomileyo zokulahleka kwesisindo
UAnastasia Volochkova waya eyofuna umyeni ukuba "Masitshatile"
Ukuba ngumfazi wangempela kweli hlabathi lanamhlanje
Izikhumbuzo kunye nezipho ezandleni zabo
I-post "300 yaseSpartans" ibhekisela kwixesha elidlulileyo nelizayo
Ukuba indoda kunye nomfazi bayamzonda